TSY RAVALOMANANA NO VATO MISAKANA NY FIRENENA – MyDago.com aime Madagascar
TSY RAVALOMANANA NO VATO MISAKANA NY FIRENENA
Anisany nanana solontena nanatrika ny fihaonana tamin’ireo voalaza fa komity mpanaramaso ny fampiharana ny tondrozotra teny amin’ny Panorama , ny ankolafy Ravalomanana. Ny Ct Feno no anisan’ireo niatrika izany, ary nanao tatitraa tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny Magro androany. Nahatsapa izy iro hoy Feno fa nisy ny fitanilana tamin’ny fametrahana ireo andrim-panjakana izao, ka nahatonga ny ankolafy Ravalomanana hisintaka. Voizina foana ankehitriny hoy izy, ny hoe izy roalahy no tsy mety mamaha ny olana eto amin’ny firenena. Tsy marina izany hoy ity mpanao politika ity. Tsy Ravalomanana no vato misakana eto fa Rajoelina. Nambarany ihany koa fa niharitra ny mafy isika nandritra izay teo taona mahery izay noho ny fanonganam-panjakana. Izahay hoy Feno, dia tsy mahalala afa tsy ny 30 na 60 andro voalazan’ny Troika izay efa kely sisa dia ho tapitra. Tokony hahafantatra isika hoy izy, hoe iza no vato misakana eto amin’ny firenena. Efa ireny hitantsika amin’ny fahitalavitra ireny ny voka-dratsy ateraky ny fanongam-panjakana nataon-dRajoelina. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany mba hiray hina sy hifankatia mba hahafahana mandresy ny fahavalon’ny tolona. Ny Cst Randrianjatovo Henri kosa dia nanambara fa ny antsika zanak’idada dia tsotra fa ny famahana ny krizy ihany. Tsy misy lalam-panorenana eto hoy izy, fa ny lalàna iraisam-pirenena dia ny tondrozotra no manakery eto. Izao ve ny sasany hoy Henri vao mahatsapa fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena.Izahay efa niteny fa tsy maintsy averina avokoa ireo lalàna rehetra efa lany teny amin’ny parlemantera. Namafisiny fa raha tsy misy ny fitoniana dia tsy milamina ny firenena.
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 septembre 2012 28 septembre 2012 Catégories Politique
12 pensées sur “TSY RAVALOMANANA NO VATO MISAKANA NY FIRENENA”
28 septembre 2012 à 22 h 31 min
Kkay taitra koa aho marina fa nanao Salovana i Ravonanto!!
ary izy dia tena mahafinaritra mihinsy an!!sa ahoana Kintana??m
f’ angaha hono HISINTAKA INDRAY???fa inona ary ity mitsanga-miemotra toa lelon-jaza ity e!!!
efa herintaona ve vao ho tonga saina fa tsy misy zavatra mandeha eo??taraika beu!!mivoaha kely
indray ary aloha maka rivotra dia miverina indray avy eo rehefa hanao sonia e!!dia toy izany hatarany.
Ho avy mihintsy aho hiresaka amin’ny RAD-ny ranavalona â !!
Tsy misy lalàm-panorenana koa maninona Ingahy Rakotoarivelo manao sonia taratasy misy hoe : Fitiavana, ets…..
Ny tondrozotra tsy nampiarina sy notanterahina amin’ny an-tsakany sy an-davany, dia inona no krizy hivaha eo ???
Tsy azoko loatra ny mouvements-nareo ry zalahy ! Izao hoy aho ilay resaka manabe lao-bary !
Noho ianareo mitaraikiraiky toy izao, dia mihevitra ny olona fa efa mandeha tsara sy miverina amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena ; dia iny ilay domelina niazakazaka nanisy sonia tany New York, mba tsy ho tapahin’ny vahoaka ny lohakeliny !
Tsy mba hita akory ny fanakiananareo, maneho hoe sonia mahakasika ny zon’olombelona no nataony, kanefa eto an-toerana VOAHITSAKITSAKA IZANY HOE ZO IZANY !!
Mba tianay ho hita rahatoa ka nandefa taratasy ôfisialy tany amin-dry Ban Ki Moon, Obama, Hollande, Vondrona eraopeana, sns…ianareo, milaza fa tsy misy zavatra manjary intsony ao madagasikara, fa efa fati-olona tsy voahisa intsony isan’andro no misy !! Noho izany tsy mendrika ny hisolo ny vahoaka malagasy io mpanongam-panjakàna io !
Ianareo ary Ingahy Zafy toa mitovy daholo, na dia efa mba mihetsika « kely » aza Ingahy Zafy !!
Efa hita fa tsy mandeha amin’izay tokony ho izy ny raharaha, dia mihonona fotsiny hoe mitohy ny tolona HAMAHÀNA NY KRIZY !!
Herin-taona mahery izao no nanaovana sonia ! Inona no vita ??? Toa miha-maizina ny tany aman-danitra, miha-ory ny vahoaka !!
Ny fantatray dia MILIBA TENA MILIBA ISAKY NY FARAN’NY ERINANDRO NY MPITONDRA, MIARAMILA, NA MINISTRA NA CST ARY CT SASAN-TSASANY !!!
Ny afera rehetra mandeha ihany ny an-dry zareo, ary ny vahoaka mosarena !
Aoka izay moa ity fanenjehana TIM sy GTT ity ry KM an ???!!!
Dia hoy aho manontany !:
Ary maninona raha mba aoka izay ity fanenjehana Mamy Rakotoarivelo sy ny miaraka aminy ity ??? Ary soa ihany fa mbola eo izy !!!
Mitaraikiraiky hoe ??? Fa misy olona hafa mba nahavita sy manao ny ataony ve ???
RAHA tsy teo ireo efa ela no tsy nisy intsony ny tolona !!!
Aoka mba ho tsaroana izay !
Fa ity aloha misy sary tiako alefa :
Raha ny fijeriko dia TOKONY mba manome ny heviny tamin’ny fihaonany tamin’i Ravalomanana
r’izareo, hoe :
Tena mbola atokisan’i Dada ve i Rakotoarivelo sy Me Hanitra sa tsia !
Mety ho dingana lehibe manala ny ahiahin’ny rehetra izany , indrindra fa ity hoe : nanao sonia ity !
Koa mba miangavy ny GTT nandeha tany Johannesbourg, hanao izany HAINGANA,!
29 septembre 2012 à 14 h 21 min
Très impressionant SON spot au tribune de l’ONU
Qu’il revienne vite car élément principal pour la résolution de la crise –
rappel: en 2002 où le pays n’a trouvé aucune voie afin de sortir du tunnel où RatsyIraka l’a engouffré,
entre autres l’ENDETTEMENT dont Mada faisait objet en ces temps: dada8 a pu les effacer grace à la crédibilité de niveau international dont il a beneficié
Sy atakalo tsy amidy vola TSY MANAM-PAHAROA
ianao ihany no filoha
(GasyGasy Tena GASY tsy misy mihoatra an’i dada)
HE Marc Ravalomanana was and remains OUR CHOICE
Observez son SPOT sur la tribune de l’onu ZANY KA LEHILAHY
29 septembre 2012 à 15 h 56 min
Izao ry zareo no azo atao.Asa aloha inona no mahatonga an’i Mamy manao sonia atsy sy aroa fa tsara kosa ny mampahatsiahy fa tsy misy mihetsika loatra ankoatran’i Mamy.Ny mety angamba dia mila lefitra izy mba hahatonga azy tsy manirery eny rehefa mihetsika.
Tsarovana koa fa i Mamy dia mandeha mihaona amin’izay tompon’andraikitra(Louis Michel,olona tao amin’ny élysée,etc…) no ataony noho ny manoratra fa ny tsy fantatra dia voalazan’i Mamy Rakotoarivelo daholo ve ny fijalian’ny vahoaka Malagasy?
Miha-ory ny vahoaka ary malahelo tokoa ny tena amin’izany.Miasa any ambadika any ihany ny profesora fa ANGAMBA tohina ny fony tamin’ilay hoe:Marc Ravalomanana sy Rajoelina ihany no tokony nivory tany Seychelles, nefa koa moa efa fantatra ihany fa izy roalahy ireo no tena tsy mifanaraka.
Noho izany ento mora ihany ilay izy KM, misy ny hetsika fa mety somary mihisitra fa misy izy aloha.Ireo izay miliba amin’izao fotoana izao anie ka olona tsy voky dia manao an’izany ry zareo e, tsy afa-po amin’ny fiainany koa angamba.Fa marina ny anao fa tokony ho karakaraina ilay vahoaka ory.
marina ny voalazanao Ratsimilaho
[L’auteur du coup d’état ne s’embarrasse de rien pour se donner en spectacle et chercher à attirer les bonnes grâces de la communauté internationale. Et peu importe, même s’il faut passer par la case reniement et ce n’est pas une insulte de le dire car il en est l’incarnation. De même, on est en droit de poser la question sur le crédit qu’il faut accorder à cette énième signature, devant caméras et témoins, émanant d’un individu qui s’est porté à la tête du pouvoir par les armes, donc sans légitimité, prenant au passage un plaisir certain à narguer les malgaches.
Le néophyte que nous sommes en matière de droit, aimerait savoir à quel nom et en vertu de quel principe, un individu s’étant imposé par la violence à la place qu’il est, n’ayant reçu aucun mandat du peuple, peut-il représenter un pays et signé un tel document ?
Le comble de l’humiliation n’est pas très loin car cette opportunité donnée à ce putschiste de signer un traité sur l’abolition de la peine de mort est une véritable insulte à la mémoire de tous ceux qui sont tombés car il est le responsable direct des tueries des 26 janvier et 7 février 2009. Il est également impliqué principalement dans les récents évènements dans le sud de Madagascar où l’on a dénombré plus de 300 victimes, sans oublier ceux qui ont perdu la vie durant ces 3 dernières années de règne de la barbarie dans le pays.]
Atteints de crétinisme
de dégénérence mentale
Les putshistes se trompent s’ils espèrent aller en un CHS (simulant handicap mental devant un jugement compétent et reconnu le moment voulu)
(et cela arrivera vu l’ampleur du désastre + prendre la communauté internationale et le vahoaka gasy pour des GAIGY)
no WAY nous réclamons TSIAFAHY ou mieux « contruction d’un geôle manara-penitra digne des typiques SERIAL KILLERS putshistes »
KAPAO FA MANIMBA NY TANY(NDRAZANA)
Des fois faut se revetir la peau du fou (sans toutefois miboridana) pour converser et/ou se faire entendre par les FOU-à-LIER des locataires actuels d’Ambohitsirohitra
J’AVAIS EMIS DEPUIS 2009 typique des putshistes est la culture et l’entretien de leurs esprits en SUBVERSIONS (c’est à la base de l’art de la révolution oranze)
(rongony de tout calibre, bain quotidien dans l’énivrance en 3V favorisant le terrain)
exetra exetra c’est une manière entre autre que l’on peut utiliser
et espérer (allons voir) des résultats probants
quand au retour à l’ordre constitutionnel OBJECTIF DES LEGALISTES
lapallise dit :
tena tsy vato misakana izy fa voasakan,ny vato
30 septembre 2012 à 9 h 41 min
Aiza ary itony amboniko itony @ fahafantarana ny tantaran’i Dago
ilay NosyMaintso ForêtVierge île-paradisiaque…:
==> indrisy lasa mena
– « na hisy rà mandriaka aza » dixit Andry Rajoelina
(de notanterahany ary tsy mitsahatra mandrak’androany, …)
– tapaho ny bois de rose hoy i Camille Vital – praiminisitra nomanin’i Firantay ary efa niandry top toa andr’i Chataigner sns
(de faingana ery namonjy an’i Comores hi-récuperer … ny anjara affaire-bois-de-roseQUOTA DE CAMILE VITAL) afin de pouvoir rediriger les containers auxdites destinations
– ny tany avaratra amin’izay business mi-rapporte ho an’ireo mponina nomena halalana handripaka ireo espèce endémique narovana niaraka @ ireo ala
(régal hoy ireo vazaha mpandalo matsiro tena nature & frais ny rôti nareo zany
Précédent Article précédent : Pr ALBERT ZAFY : FANOVANA HAINGANA NY MPITONDRA NO HIDIRANA AMIN’ NY FAMAHANA NY KRIZY
Suivant Article suivant : RAKOTOARIVELO MAMY : NY MPANONGAM-PANJAKANA NO TSY AFAKA MILATSAKA